Mbiri yekambani - Genzon
Genzon Novel Zvishandiso
Yakagadzwa muna 2017, Shuyang Genzen Novel Equipment Co, Ltd. (ino inonzi "GENZON Novel Equipment") iri pasi pesimba reGENZON GROUP iyo zvakare inotora kutonga kwayo uye kushanda kwayo.
Genzon Novel Equipment ndeye yakakwira-tech bhizinesi yakasarudzika mumunda wezvinhu polymer, kubatanidza chigadzirwa R & D, kugadzirwa uye kutengesa kune rakawanda zvigadzirwa uye rakazara mapoka. Iyo polyester firimu yakazvimiririra yakazvimiririra uye inogadzirwa nekambani inogona kushandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana siyana maindasitiri senge aluminium kuisa, kudhinda, kuchengetedza kadhi, bronzing, kuburitswa, goridhe nesilver waya, kink firimu, isina mvura, uye mune ramangwana, kambani anoronga kuwedzera basa rezvekushandisa zvekare polyester zvinhu.Zve ikozvino, kambani ine zviuru gumi zvematani toni yekugadzira gadzira giraini, 4 yeGerman donier yakananga inonyungudutsa biaxial tensile firimu kugadzira mitsara uye 1 yekumba test test. Iyo ndeyayo inogadzira uye R & D zvigadziko muJiangsu nedzimwe nzvimbo.
Mune ramangwana, Genzon Novel Equipment ichave yakavakirwa pamabatirwo epasi rose ekuvaka dhizaina reChinese uye nekuedza kuve mutungamiri mune ino nyowani indasitiri yezvinhu kuburikidza nekubatanidza zvakanakira zviripo, kusimbisa yakazvimirira innovation, nekugadzira yakachena uye nharaunda inoshamwaridzana zvinhu zvitsva.
Genzon Investment Boka
Genzon Investment Group Co, Ltd (iyo "Genzon") yakavambwa munaDec 2003. Iri nemusoro wayo uri muShenzhen, Genzon ine vashandi vanopfuura zviuru zvishanu munyika yose. Kumisikidzwa semubatsiri webasa kwemaindasitiri akanyanya, Genzon inowanzoisa mukudyara kwemaindasitiri, kuvandudza zvivakwa zveindasitiri, kuvaka uye kushanda kwemasasa emahofisi, pakati pemamwe mabhizinesi.
Panyaya yekudyara kwemaindasitiri, Genzon inovandudza mumishonga yemishonga, zvishandiso zvitsva uye kugadzirwa kwesimbi ine musimboti wekuvandudza kwekugovera zviwanikwa pamusika. Mauri, Welmetal yakazvipira mukugadzira uye R&D yezvakanaka zvigadzirwa zvesimbi, nepo Genzon Nyowani Nyowani inotarisa kumunda wezvinhu zvemapolymeric. Iko kune zvakare akawanda mabhizimusi e-capital bank mune zveGenzon portfolio. Panyaya yekuvakwa uye kushanda kwemayunivhesiti makambani, Genzon inotarisana nemabhizinesi ayo muGreater Bay Area, uye pari zvino inozvitengera uye inoshanda kambani dzakawanda dzekumaindasitiri.
Kwemakore gumi apfuura, Genzon inonamatira kumisheni yekugadzira inoshamisa ecosystem uye anozvitsaurira kuve rakavimbika bhizinesi bhizinesi. Kubata mikana munguva yenguva huru yekuchinja uye kugadzirisazve hupfumi muChina, Genzon, semazuva ese, inosimudzira uye nekushandira maindasitiri akanyanya kukosheswa uye kutsigira kuvandudza maindasitiri kuburikidza nenzvimbo dzayo dzehofisi dzinoshamisa uye masevhisi anobatsira. Genzon Boka rakagadzira maporosari neindasitiri park uye vagari. Kwemakore, yakavandudza bhizinesi rakaoma, zvivakwa zvehofisi, vagari, hotera uye gorabhu kirabhu, uye vakawana zvakatungamira nezviitiko mukuvandudza kwemaindasitiri uye kutonga kwezvinhu.
DZIDZO YEKUFUNDA UYE KUDZIDZA
Yepakati peR & D boka, inotungamirwa nachiremba anga adzidza muAmerica, inomira muSilicon Valley kuti itore hunotungamira hwenyika
Iyo yepamusoro-yechikamu chekurima firimu yekudzidzira inobatsira kwedu kwakarongeka hunyanzvi mukugadzira, kudzidza nekutsvagisa
Iyo inoshatisa polyester synthesis tekinoroji, chirongwa chepasi rose chakazvimirira cheuchenjeri hwehunyanzvi nehunyanzvi hwemvumo nemvumo yematunhu gumi nemashanu kusanganisira China, US, Europe, Japan neTaiwan.
Kubvumidzwa kweProjekiti kwekutsvaga kwekutsvaga kwekushambadzira kwekushambadzira kwe Jiangsu Province muna 2014
Mubairo wechipiri pakupedzisira weChitatu China Innovation uye Emabhizimusi Emakwikwi - Novel Equipment Industry muna 2014
Isu tine nyanzvi, ine ruzivo uye inoshanda timu yekusimudzira kukurumidza uye kusimba kusimudzira kweENZZON Novel Equipment mune zvikamu zvekutsvaira tekinoroji nekusimudzira, kugadzira hutongi, kutonga kwemhando, kushambadzira kushambadzira uye bhizinesi kushanda uye manejimendi.
Kugadzirwa kwegore rimwe nemakumi mapfumbamwe nemazana matani mumadhiza 110,000m2
Ina Dornir firimu-dhizaini yekugadzira mitsara uye imwechete yakagadzirwa-imba yekuyera mutsetse
Mashopu pasi pe6S akajairwa manejimendi